असोज २८ मै संसद् विघटन : शुक्रबारै अन्तिम बैठक - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०७४, बिहीबार
काठमाडौ । स्वयम्भू मन्दिर परिसरको एउटा ढुंगा हरेक दिन तात्न थालेपछि ढुंगा हेर्ने र त्यसको कारण बुझ्नेहरूको […]
काठमाडौं । सरकारले पूर्वसभासदको बिदाईमा झण्डै चार करोड खर्च गर्दैछ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका १२ […]
समानुपातिक फेरबदल गर्दै प्रमुख दलहरू : को-को परे समानुपातिकमा ?
काठमाडौँ । समानुपातिक सांसदका लागि हतारमा सूची बुझाएका दलहरूले अधिकांश नाम फेरबदल गर्दै निर्वाचन आयोगमा […]
डा.केसीलाई आइसियूमा सार्ने तयारी
काठमाडौँ । एघार दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गल्दै गएको छ । प्रतिदिन स्वास्थ्य अवस्था […]
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का महासचिव प्रभाषकुमार शाहले सामान्य प्रशासन […]
पदावधि सकिदै गर्दा सासंदले बाँडे १० अर्ब
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान व्यवस्थापिका सांसद सदस्यहरुले […]